Maxaa ku jira Magaca Blog-ka? | Martech Zone
Sabtida, Juun 15, 2006 Talaado, July 4, 2017 Douglas Karr
Akhriska kadib Wadahadal qaawan by Robert Scoble iyo Sheel Israa'iil, Waxaan go'aansaday inaan waxoogaa isbeddel ah ku sameeyo balooggeyga. Inta badan gaar ahaan, magaca baloogga. Bloggeygu wuxuu ahaa mid fudud “Douglas Karr”Kahor, laakiin xoogaa shaqo ah ayaan ka qabtay magaca oo la xushay Saameynta iyo otomaatigga. Waan ka qoray halkan.
Waxaan ku qabtay waxyaabo fiican goobta sidoo kale, anigoo adeegsanaya sawir gacmeedyo si fiican u muuqda, cinwaan madaxeed cusub oo wata muraayadeyda dhoolla caddeynta, iyo taxaddar taxaddar leh waxyaabaha ku jira. Waa inaan dhahaa, in kastoo, caan ku ahaanshaha balooggu si aad ah ayuu isu beddelay tan iyo markii dib loogu magac daray. Intii aan horay u heli jiray qulqulka taraafikada, hadda waxaan helayaa hits badan oo badan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka fekero in si fudud tayada waxyaabaha ay iga caawisay inaan soo jiito akhristayaal badan. Laakiin sida suuq geynta xogta, waxaan garowsanahay in markii aad bedesho hal dhinac oo olole ah oo aad waxa kale oo dhan isku mid ka dhigto - badiyaa waa isbeddelka aad sameysay ee keenaya farqiga. Xaaladdan oo kale waxay ku beddelaysey boggeyga magac ka xiiso badan.
Dabcan, haddii aan lahaa magac sida Robert Scoble, Seth Godin, Malcolm Gladwell, iwm… Uma baahni inaan sameeyo wax ka badan waxa ku dhejinaya magacayga baloog. Si kastaba ha noqotee, Douglas Karr caan maaha (wali). Kama beddelin guntin casaan guri, ma sii deynin macluumaad cusub oo CIA ah, mana daah-qaadin sirta dhallinta! Ma doonayo 15 daqiiqo oo caan ah, in kastoo aan jeclaan lahaa inaan maalin uun fikirradan oo dhan si wada-jir ah ugu wada daro hal mug.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in inbadan oo idinka mid ahi ay soo booqdaan. Haysashada baloog marwalba waxay ku jirtaa maskaxda maskaxdayda. Wax badan ayaan ka bartay dad badan oo aan u maleynayo in baloogyada, suurtagal ahaan, ay yihiin waxa ugu fiican ee ku dhaca webka.
Tags: magaca blogmalcolm goodwellmagacaRobert scobleseth godinSheel Israa'iil
Jul 16, 2006 markay ahayd 12:13 AM
Miyuusan ku soo beegmin Seth Godin la sheegay? (Hambalyo BTW-daas). Waan ogahay inuusan ku xirnayn goobta, laakiin waxaan u maleynayaa in dad faro ku tiris ah ay magacaaga ku baari doonaan. Falanqaynta miyuu tan muujinayaa gabi ahaanba? Kaliya waan xiiseynayaa…
Jul 16, 2006 markay ahayd 9:51 AM
Waxaan helay 27 hits oo ka mid ah raadinta doug + karr maalintaas, laakiin tan iyo markaas waxba ma helin. Waan ka faa'iideysanayaa Google Analytics. Waxaan si aad ah ugula talin lahaa inaad isqorto, waxay si gaar ah waxtar u leedahay hadaad iskudayeyso inaad raadiso oo aad kobciso akhriskaaga baloog. Sidoo kale, haddii aad leedahay WordPress, waa arrin kaliya inaad ku koobiyeysid qoraalka boggaaga mawduuca. Aad u fudud in la kaco oo la ordo!
Jul 16, 2006 markay tahay 5:04 PM
Waxaan marwalba xiiseynayaa cilmi baaris aasaasi ah oo ku saabsan isbeddelada suuqgeynta. Tani hadda waxay ku dhowdahay bil. Muxuu ahaa saamaynta muddada dhexe ee dib u sumadeynta bartaada?
Waxaan xiiseyn lahaa jaantuska GoogleAnalytics ee la cusbooneysiiyay (waxay noqon kartaa laba oo leh qiyaas lix toddobaad ah), kaliya si aan u arko haddii saameyntu ay duugowday muddo ka dib iyo sidoo kale, ma kuwa kale ayaa ku xirmay magacaaga cusub isla xiriir isku-xir ah ( allinurl:…).
Waxaan rajeynayaa inaad daabacan doontid dabagal.
Jul 16, 2006 markay tahay 5:14 PM
Xaqiiqdi waan idinla socodsiin doonaa waxaanan daabici doonaa dabagal. Waxaan bilaabay dhowr isbeddel oo ku yimaada goobta si joogto ah. Kuma aanan xisaabtamin caan ka noqoshada boggan gaar ah, in kastoo. Noocyada naxariista leh ee ka Wadahadal qaawan xiisaha qaatay sidoo kale. Waxaan ka baqayaa inay taasi lambarkayga ku sii waddo ilaa heer ay saameynaha kale aysan u muuqan inay isbeddel sameynayaan. Waa dhibaato fiican in la haysto, in kastoo!
Febraayo 19, 2007 saacadu markay tahay 10: 33 AM
Waxaan xiiseynayaa shaxda GoogleAnalytics ee la cusbooneysiiyay (waxaa laga yaabaa inay tahay laba oo leh qiyaas lix toddobaad ah), kaliya si aan u arko haddii saameyntu ay duugowday muddo ka dib iyo sidoo kale, ma kuwa kale ayaa ku xirmay magacaaga cusub isla xiriir isku-xir ah ( allinurl :?).
Feb 20, 2007 markay ahayd 8:08 PM
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga! Waxaan daabacay tirooyin aad u tiro yar tan iyo qoraalkan. Waxaan sii waday koritaan - illaa heer hadda balooggu dhab ahaantii yareeyo taraafikada wakhtigaas. Lambarada waligood hoos ugama hooseyn halka ay ku taal muuqaalka aad aragto sidaa darteed weli waxaan aaminsanahay in beddelaadda magaca ay door weyn ka ciyaartay.
Jun 11, 2007 saacadu markay ahayd 3:53 AM
waad ku mahadsantahay fikradahaaga. Laakiin Google Analytics waxaa ku jira waqti dambe (3 saacadood..waa laga yaabaa 4 saacadood) mararka qaarkood 1 maalin laga yaabee ..
Waxba ma uga qaban karaa? ma waxay ku saabsan tahay waqtiga mise waa dhibaato genaral ah oo ku saabsan falanqaynta Google?
Jul 3, 2007 markay ahayd 9:02 AM
Waxaan u maleynayaa in dhibaatadan sababteeda ay tahay interface cusub. Hadda waxaad isticmaali kartaa google-ga falanqaynta 'interface cusub .. waxay umuuqataa mid wanaagsan. oo waxaa jira kaliya 3-4 saacadood.